Nadiifinta Degdega ah Ka dib Burbur Baxsan, USA - Ellicott Dredges Blog
Kooxda Dredges oo leh Draglines on Quick River nadiifinta kadib Mt. St. Helens Volkoos Feejignaan, USA
Source: Jidka weyn & Magazine culus Magazine
Laba biyo-biyoodyo waaweyn, oo lagu dhex-dhejiyay unugyo dul sabeeya iyo jiiditaanno xeebeed-ku-saleysan, celcelis ahaan ku saabsan 60,000 cu.yd. maalinba meel ka qulqulaya iyadoo dhaqso u nadiifinaysa afar mayl oo ah wabiga Cowlitz ee ashqaraarka ka dib qarixii Mt. St. Helens. Laakiin kala furfurida qulqulka weyn, raridda iyo dib u ururinta iyo bilaabista ayaa qaatay shan toddobaad.
Canonie-Bultema Pacific Corp., oo ah shirkad laga leeyahay The Canonie Shirkadaha, Inc., South Haven, Michigan, waxay adeegsatay qaab ku saleysan badda iyadoo ay ka cadeyneyso 4.4 milyan cu.yd. ee wasakhda ciidda ah ee ka socota Wabiga Cowlitz ee hoos yimaada laba qandaraas oo gadaal-gadaal ah oo loogu talo galay Ciidanka Asluubta. Qandaraasyada waxaa lagu qiimeeyay ugu yaraan $ 20 milyan.
Jim Collins, maamulaha mashruuca ee Canonie-Bultema, wuxuu ku hogaamiyay koox 75 ilaa 85 raysalwasaaraha iyo shaqaale hoosaad ka shaqeynaya labo saacad 12-saac, toddobo maalmood usbuucii.
"Dadaalkii ugu weynaa ee ugu weynaa wuxuu ahaa helitaanka qalabka halkan," ayuu yiri Collins. “The Bobby J, 1700-hp, 18-dredge oo culeyskiisu yahay 375 tan, ayaa lagu kala saaray Michigan, waxaa lagu raray gawaari xamuul ah, dhaqaaqay 2200 mayl, dib ayaa loo soo uruuriyay wax soo saarna lagu sameeyay 30 maalmood. ”
Waxay qaadatay shan toddobaad in la raro 500 oo tan "Marialyce Canonie“, 2250-hp, 24-inji oo dredge 2800 mayl u jirta Baltimore. The "Marialyce Canonie ” waa Ellicott® Sumadda “SUPER-DRAGON®”Dredge Labada godod iyo qalab kale oo taageera ayaa u baahday raxan ka badan 60 baabuur oo xamuul ah si ay u dhaqaaqaan.
Labada geed ee waaweyn ayaa la isugu keenay lagana bilaabay meel u dhaw bartamaha bartanka mashruuca afarta mayl ah, oo ay kujirto '18-in'. dredge isagoo ka dhigaya marinkiisii ​​ugu horreeyay iyo qaybta 24-inji oo ka shaqeysa dhinaca hoose. Saddex qulqulatooyin yaryar ayaa si gooni gooni ah loo soo saaray waxaana loo wada shaqeeyay koox ahaan dhinaca koonfureed ee shaqada, halka ay wali tahay mid kale oo ah 14-in dredge wuxuu ka shaqeeyey dhamaadka waqooyiga xad dhaafka ah.
Markii la soo afjaro bilowga, Bobby J loo weeciyay dhanka hoose iyo Marialyce waxaa loo leexiyay dhanka kororka ballaarinta waxayna u dhowdahay balaadhka kanaalka oo dhan. Labada qaybood ee waaweyn ka dib waxay socodsiiyeen nadiifinta ugu dambeysa.
Dhererka weyn ayaa midkastaaba wareegaya qiyaastii xNUMX ft. Ballac ah halka uu kaqeyb qaadanayo xuubka shaqeynaya. Shan iyo lix-go 'go' madax ayaa lagu dhejiyay jaranjarada isku dhejiyay si ay u qodaan baanka 200 ft. Unug kasta wuxuu horay ugu sii socon lahaa xNUMX ft halkiikiiba, oo leh dherer dheeri ah oo ah '19 ft. Dhererka tuubbada saboolka ah ee lagu daray qadka dheecaanka hadba sida loogu baahdo.
Afar xarigood oo waaweyn, Lima 2400 leh 8 cu.yd. baaldi, Bucyrus-Erie 88B oo leh 5 cu.yd. baaldi, Mareykan ah 7260 iyo P&H 966, oo labaduba lagu rakibay 4 cu.yd. baaldiyo ayaa geesaha ka jaray bangiyada kanaalka waxayna dhammeeyeen dhinacyada jihooyinka ee 350 ilaa 450 ft. Kanaal ballaaran.
Markii hore, boobka ka yimaada dooxada ayaa lagu keydiyey mogadyo-mokuti-moge oo ku yaal meel xeebta ka baxsan. Saddex Fiat-Allis 21B dabeysha iyo laba mashiinno Kaabayaal yar-yar ayaa loo istcimaalay inay kor u riixaan dusha sare ee qashin-qubka si ay u sameeyaan tuullo-dhul-labaad ah iyo in laga gooyo qashin-qubka tuubbada dambe ee weelka xamuulka ah ee dib ugu soo noqonaya webiga. Dooxooyinka la aasaasay ayaa qayb ahaan la buuxiyey inta lagu gudajiray qulqulka labada biyood ee waaweyn waxayna wali lahaan karaan awood haddii loo baahdo.
Xaaladaha badankood, dhulka ku dhex yaal bannaanka daadadka waxaa si fudud loogu soo saarayaa sare, laakiin milkiileyaasha qaarkood ayaa maskaxda ku haystay adeegyo gaar ah. Naadiyada mootada maxalliga ah ee leh hal marin weyn ayaa rajaynaya inay ka dhisaan taallo ku teedsan wabiga dhinaceeda oo ku wajahan xarig jiidis iyo wareejin wareega gawaarida qashinka.
Celcelis ahaan heerarka wax soo saarka maalinlaha waxay ahaayeen qiyaastii 30,000 cu.yd. leh Ellicott® Summad ”SUPER-DRAGON ™” Marialyce, 15,000 cu.yd. ee Bobby J, iyo 15,000 cu.yd. kuwa kale.
Saddex dhibaato oo muhiim ah oo uu soo xigtay Collins waxay ahaayeen carrada aan xasillooneyn ee meelaha qashin-qubka, goynta geesaha, iyo helitaanka shaqaale khibrad leh.
"Caadi ahaan qashinka qalalan ee xasilloon ee meelaha qashin-qubka ah ayaa isku rogay markii ay ka dhergeen biyaha shaqeeya ee ka yimid meelaha laga soo tuuro," ayuu yiri Collins. "Dib-u-habeyn lagu sameeyo tuulmooyin si loo dhiso hareeraha hareeraheeda waxay ahayd shaqo jilicsan oo loo yaqaan 'dozers', waxaana si aad ah u adkeeyay lugo jilicsan oo aan la isku halleyn karin.
“Dambaska u ekaa ciidda oo kale waa mid fiiqan oo xoqan. Waxay sababtay xirasho daran oo ku saabsan geesaha jarista iyo dhaqaaqa qaybo ka mid ah mashiinada ku saleysan dhulka iyo meelaha wax lagu jaro, qalabka wax lagu shubo, kiimikada mashiinka lagu rito iyo taarikada safafka ah ee dul saaran. Alaab-qeybiyeyaashu ma awoodin inay la socdaan baahida degdegga ah ee qaybaha beddelaadda. Waxay ahayd inaan been abuurno qaybo badan oo bedelkeenna ka mid ah oo aan dib u hagaajinno iyo wajaho adag oo qaybaha la isticmaalay ka badan intii caadiga ahayd.
"Taariikh ahaan, Woqooyi-galbeed ma aysan helin shaqo badan oo qodaalka wabiga, Corps of Engineers-ka waxay ku maareeyeen inta badan qalabkooda dayactirka iyo dadka," ayuu raaciyay Collins.
"Laakiin shaqadani waxay ahayd mid aad u weyn oo xaddi badan oo qalab iyo shaqaale khibrad leh ay ahayd in laga keeno bartamaha-galbeed iyo koonfurta si loo daboolo baahiyaha gaarka ah qaraxa ka dib."
Waxaa laga daabacay Jidka weyn & Magazine culus Magazine